TENY GASY 2.0 – Ho fampiroboropoana ny teny malagasy any amin’ny aterineto
Sambany no hisy hetsika fampifandraisana ny teny malagasy sy ny aterineto toy izao eto Madagasikara. Hotanterahina ny 19 Jona ho avy izao ao amin’ny IKM Antsahavola ny TENY GASY 2.0 andiany voalohany.
Manodidina ny aterineto sy ny teny malagasy
Mandritra ny tontolo andro dia hianoka tanteraka ao anatin’ny tontolon’ny aterineto ireo mpanatrika. Hatomboka amin’ny loabariandasy izany ny maraina. Hiaona eo an-databatra boribory ireo mpisehatra eo amin’ny aterineto toy ny mpandrindra ny vondrona Facebook Izany Ka Malagasy, ny mpampiditra lahatsoratra ao amin’ny Wikipedia, ny mpitantana ny tranonkala pôetawebs ary ny mpandrindra ny vohikala serasera.org.
Ny tolakandro indray dia hisy atrikasa toy ny fampianarana manokatra sy mitantana blaogy izay entin’ny Blaogin’i Voniary ary koa ny fampidirana lahatsoratra ao amin’ny Wikipedia entin’i Bellarmin, mpandika teny matihanina. Mbola ho avy ao koa i Dr Oliva Ramavonirina, filohan’ny Vaomiera Malagasy misahana ny teny miampita sisin-tany hampatsiahy ny lanjan’ny teny malagasy sy ny fitsipi-panoratana.
Hampahafantarina amin’ny fomba ofisialy mandritra io hetsika io ihany koa ny tranonkala soa.mg natsangan’ny STEM4Good. Tranonkala ifarimbonana natao hampitana vaovao sy hanehoan-kevitra amin’ny fomba miabo izy io ka iantsoana ireo rehetra vonona hanoratra amin’ny teny malagasy ao anatin’ireo lohahevitra voafaritra.
Petadrindrin’ny TENY GASY 2.0
cc : Blaogin’i Voniary
Ny besinimaro no hasaina hanatrika ny hetsika ary tsy misy vidim-pidirana izy io. Ireo izay tsy afaka mankeny an-toerana moa dia hahazo tombony manokana amin’ny alalan’ny fandefasana mivantana ny loabariandasy ao amin’ny pejy Facebook Blaogin’i Voniary.
Tsy mivaona amin’izay fampiroboroboana ny teny malagasy izay ihany dia hisy varotra sy fampirantiana boky malagasy tanterahin’ny Antseva, Faribolana Sandratra ary Havatsa UPEM amin’io fotoana io. Tsy adino ihany koa ny kojakojam-birao entin’ny Paper Store.
Fiaraha-misalahy ho an’ny teny malagasy
Vitsy ireo mpisehatra any amin’ny aterineto mampiasa ny teny malagasy satria mirona amin’ny teny frantsay kokoa ny ankamaroan’izy ireo. Izany indrindra no antony nikarakarana ity hetsika ity: mba ho fampahafantarana ny besinimaro fa velona ny teny malagasy any amin’ny aterineto ary mba ho famporisihina ny fandraisan’anjaran’ny rehetra sy ny fiaraha-mientana.
« Tsy efan’olon-drery ny fampiroboroboana ny teny malagasy any amin’ny aterineto satria toy ny asa vadi-drano, tsy vita raha tsy ifanakonana. Mila ny fandraisana anjaran’ny besinimaro, mila ny anjara birikinao na amin’ny famakiana ireo voasoratra na indrindra amin’ny fampitomboana hatrany ny raki-tsoratra isan-karazany.
Hoy indrindra i Voniary, mpikarakara ny hetsika:
Ny aterineto manko dia varavarana lehiben’ny fanatontoloana ka matetika mandray izay avy any ivelany fotsiny isika Malagasy. Azo atao ary tokony hatao mihitsy anefa ny mamokatra zavatra ary manondrana izany any ivelany, tsy eo amin’ny sehatra ara-barotra ihany izany fa eo amin’ny aterineto ihany koa. Raha haintsika tsara ny mitrandraka io teknolojia io dia hitondra vokatsoa ho antsika izy io.
“Tokony ho fantatry ny besinimaro ihany koa fa fitaovana iray azo ampiroboroboana ny kolontsaina malagasy ny aterineto sy ny tontolony ary indrindra isarihana ireo tanora hiverina amin’ny maha-malagasy.
Hoy ihany i Voniary
Mose Njo mpanolotsaina sy Voniary mpikarakara ny hetsika TENY GASY 2.0
Tsara araraotina hatrany ny hetsika toy itony mba hanovozam-pahalalana ary indrindra hahafantarana ireo mpisehatra sy hikarohana fiaraha-miasa. Ambohipihaonan’ny mpisehatra amin’ny aterineto, ny tanora sy ny mpampiasa aterineto, ny mpanoratra sy ny poeta ary ny mpandala ny maha-malagasy io andro io ka asakasak’izay tsy ho avy. Manomboka amin’ny 08 ora sy sasany ka hatramin’ny 5 ora hariva ny hetsika TENY GASY 2.0 ny 19 Jona ho avy izao ao amin’ny IKM Antsahavola. Tongava maro e!
Publié dans Evènements et Malagasy